QORSHE: Real Madrid Oo Maalinba Qorshe Cusub Dhigaysa Si Ay Paul Pogba U Hesho, Zidane Oo Warkiisa Caddeeyay & Waxa Haatan U Qorshaysan Los Blancos. - Gool24.Net
QORSHE: Real Madrid Oo Maalinba Qorshe Cusub Dhigaysa Si Ay Paul Pogba U Hesho, Zidane Oo Warkiisa Caddeeyay & Waxa Haatan U Qorshaysan Los Blancos.
Shaki la’aan waxa ay Real Madrid geed dheer iyo mid gaabanba u koraysaa sidii ay suuqa xagaagan ku heli lahayd kubad sameeyaha Manchester United ee Paul Pogba iyadoo waliba cadaadis kala kulmaysa dhigeeda Juventus.
Pogba ayaa ahaa mid dhawaan sheegay inuu doonayo bilaabista loolan iyo tartan cusub iyadoo hadalkaasi caddeeyay rabitaankiisa ah inuu iskaga tago Old Trafford xagaagan.
Si lamid ah Pogba wakiilkiisa Mino Raiola ayaa si cad u sheegay in dhammaan shaqsiyaadka ku sugan Manchester United ay ogsoon yihiin rabitaanka xiddiga uu wakiilka ka yahay ee ah inuu faarujiyo kooxda.
Marka laga yimaado aragtida Paul iyo wakiilkiisa, Tababaraha Red Devils ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu door midkii hore ka wayn siiyo 26 jirkan ree France xilli ciyaareedka soo socda.
Sidoo kale tababaraha ree Norway ayaa la sheegay inuu doonayo inuu Pogba kusoo celiyo masuuliyada kabtan ku xigeen ee kooxda oo uu hore uga xayuubiyay tababarihii la caydhiyay ee Jose Mourinho.
Haddaba, Koox kastaa qorshaheeda lehe haatan Real Madrid oo ah kooxda ugu cad cad saxeexa Pogba ayaa doonaysa qaabkii ay kula kulmi lahayd dalabaadka Man United ay ku fasaxayso xiddigeeda.
Iyadoo Manchester ay 150 Milyan ku qiimaynayso Pogba ayaa la sheegayaa in Madrid ay keentay qorshe cusub oo ay lacagtaas ku dhammaystirayso waana inay kooxdeeda ka fasaxdo xiddigaha kala ah James Rodriguez iyo Lucaz Vazquez si ay lacagtaas kala badh uga samayso.
James ayaa u muuqda mid kusii jeeda dhinaca kooxda ree Talyaani ee Napoli si uu halkaas ugula midoobo tababarihiisii hore ee Carlo Ancelotti halka Lucaz Vazquez lala xidhiidhinayo Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, Tababaraha Los Blancos ee Zinadine Zidane ayaa isagu warkiisa u caddeeyay madaxda kooxdiisa isaga oo u sheegay inay dalab xoogan oo aan la diidi karin ka gudbiyaan Pogba oo uu qorshihiisa halka sarre kaga darsaday.